Shina: Li Wangyang Gadra Politika Noho Ny Raharaha Tiananmen, Hita Maty Nihantona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2012 8:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Svenska, Català, Español, English
Li Wangyang, Shinoa iray gadra politika izay nandany betsaka tamin'ny androm-piainany tany am-pigadrana, dia hita maty ny marainan'ny Alarobia 6 Jona 2012, taorian'ny resadresaka nataony ho an'ireo mpampahalala vaovao avy any ivelany mikasika ny vonomokan'ny 4 Jona (Kianja Tiananmen) tamin'ny 1989 sy ny fiainan'ireo gadra politika ao Shina.
Li dia nafahana tamin'ny 5 May 2011, taorian'ny 22 taona nifonjàna, nanjary jamba sy marenina noho ny fampijaliana natao azy. Izy dia mpiasa sy mafàna fo navitrika ary nandray anjara tamin'ny hetsika demaokratikan'ny mpianatra tamin'ny 1989tamin'ny naha-mpitarika lohalaharana azy tao amin'ny ligy mahaleotenan'ireo mpiasa tao an-tanànan'i Shaoyang.
Voasambotra taorian'ny famoretana ny hetsika tao Tiananmen izy ary nalefa tany am-ponja nandritra ny 11 taona noho ny fiampangana azy ho nanakorontana fanjakana. Nanomboka nitokona tsy hihinan-kanina izy tany am-ponja ary nampijaliana; nendahan'ireo mpiandry fonja ny nifiny ary noteren'izy ireo hisakafo izy. Nafahana kely izy tamin'ny 2000 saingy nalefa tany am-ponja indray ny May 2001 hisazy folo taona tamin'ny famoretana nahazo ny Antoko Demaokratika Shinoa, tamin'ity indray mitoraka ity dia noho ny fiampangana azy ho niantso ny hafa hanozongozona ny fahefam-pitondrana.
Li Wangyang sy ny anabaviny tany amin'ny hopitaly. Dikasarin'ny fàfana tamin'ny vaovaon'ny fahitalavitra Hong Kong Now TV.
Nitafatafa tamin'ny fahitalavitra avy any Hong Kong izy ho anà tantara iray asongadina momba ny faha-23 taonan'ny vonomokan'ny 4 Jona. Tao anatin'ny resany, niteny izy fa tsy hanenenany mandrakizay izay vitany ho an'ny fiovàna demaokratika ao Shina ary nandrisika azy ny fisisihan'ny mponina ao Hong Kong amin'ny fanekena ny fisian'ny vonomoka tamin'ny 4 Jona.
Araka ny tatitry ny Fikambanana Shinoa Mpiaro ny Zon'olombeolna WeiquanWang [zh], ny anabavin'i Li no nahita ny vatana mangatsiakany nihantona tamin'ny tolanam-baravarankelin'ny hopitaly nisy azy tamin'ny marainan'ny 6 Jona tamin'ny 7 ora, toy ny hoe namono tena. Nalain'ny polisy haingana ny fatin'i Li tsy niraharahiana izay fangatahan'ny fianakaviana mba haka sary ny vatana mangatsiakany. Tsy mety mino ireo sakaizan'i Li fa hoe namono tena izy :
Araka ny hevitr'i Zhu Chengzhi [naman'i Li], ny 4 Jona izy dia niresaka ela tamin'i Li ary be fnantenana i Li. Na dia narefo aza ny ara-pahasalamany, be ny olona no nanohana an'i Li ary efa niverina tsikelikely ny fahasalamany. Omaly [5 Jona], nangataka tamin'ny anabaviny i Li mba hividy radio ho azy mba hanombohany mizatra mihaino [miaraka aminà fitaovana fanampiana ny marenina].
Sary roa [TANDREMO: sary mahery setra] nambara fa nalain'ireo nanatri-maso teo amin'ny toerana nihantonany no mivezivezy be any anaty Facebook sy Twitter any. Izy ireo dia mamppiseho fa ny tolanam-baravarankely nihantonan'i Li dia iva dia iva tokoa ary ny tongony aza dia mbola nitehan-tany.
Ireo Shinoa mpiondana aterineto dia tohina tamin'ilay vaovao, ity ambany ity ny fantina tamin'ireo bitsika fanehoan-kevitra noho iny tranga iny tao amin'ny Twitter [zh]:
@BaiqiaoCh: Tena faran'izay manafintohina ity. Tsy mba vitan-dry zareo akory na dia ny nanamboamboatra ilay lazaina ho famonoan-tenan'i Li Wangyang aza ary tsy raharahany izay hatezeran'ny olona any. Te-hikaroka izay mpamono olona mandritra ny androm-piainako aho.
@tufuwugan: Mba marina, Li Wangyang lehilahy nahavita niaritra ireny 21 ireny tany am-ponja, nefa maty tamin'ny fomba tsy natoraly tao amin'ny hopitaly, amin'izay eo ambany fnarahamason'ny polisy miisa folo. Fanampin'izany, jamba sy marenina izy ary tsy afaka ny hihetsika malalaka araka ny sitra-pony akory. Misy zavatra ifandraisany amin'ireo namepetra ny fahalalahany ny fahafatesany. Olom-pirenena malalaka i Wangyang; ireo izay naneritery ny fahalalahany no namono azy. Ny fanakanana ny havany sy ny namany tsy hahazo mijery ny razana tamin'ny fitondràna an-keriny ny vatana mangatsiakany hiala teo dia midika fa ry zareo no meloka.
@crushglass_X: Mba olona firy no nandre momba an'i Li Wangyang fony fahavelony? Ankehitriny izy maty ary dia lazaina fa mpiady mahery ho an'ny demaokrasia. Izao no mampiseho fa tsy dia misarika ny sain'ny olona loatra ireo tsy mba malaza. Ho an'ity vondron'olona ity, ny sanda naloan-dry zareo no ùisy lanja kokoa miohatra amin'izay malaza sy eken-teny any.
‏@xuange12: Matetika dia toy izao no fitrangan'ny raharaha : Manelingelina ny tontolo politikako ny alokao, avy eo ianao lasa ho ilay ratsy tarehy tsy ilaina. Eto amin'ny faritry ny taniko, tsy refesi-mandidy aho. Raha ny fihevitro dia maty novonoin'ireny olona tery saina ireny i Li Wangyang. Raha mba nanana fahatsiarovantena ry zareo, tsy ho nanao zavatra tahaka izany. Tsy misy na iza na iza hahazo tombony amin'izao. Fihetseham-po tsy misy fotony, mifangaro aminà fahefana tsy hita fetra, no mety hitondra amin'ny toy izao.
‏@wenyunchao: Raha tsy vitan'ny manampahefana ny manala ny ahiahy hoe “noterena hamono tena” i Li Wangyang, azontsika atranga ve ny ahiahy tsy azo ialàna hoe manomboka mamono ireo mpanohitra politika any an-katakonana any ny manampahefana?
Ny antony voalohany miteraka famonoan-tena dia ny rarin-tsaina tsy nisy fandraisana an-tànana. Azo tsaboina ny rarin-tsaina ary azo sorohana ny famonoan-tena. Afaka mahazo fanampiana avy amin'ny fifanohanana amin'ny alàlan'ny antso ireo mikasa ny hamono tena na ireo olona manana olana ara-pihetseham-po. Tsidiho ny Befrienders.org raha te-hitady fanampiana mifanandrify amin'ny firenenao ianao (Madagasikara toa mbola tsy manan angamba).